Ngwurugwu ekwuru nke Ekwensu: Nri ma obu abughi, ebe Ngwurugwu nke uwa di - Mkpụrụ ubi - 2020
Ekwensu mkpịsị aka ero: nri ma ọ bụ?
Nature bụ onye okike a na-atụghị anya ya. Ọ nwere ike ịmepụta ọ bụghị naanị osisi dị ịtụnanya, kamakwa ndị ahụ, n'ụzọ doro anya, na-emenye mmadụ ụjọ. Otu n'ime ihe ndị o kere dị ka ero ndị mmụọ ọjọọ, "mkpịsị aka nke ekwensu," dịka ndị mmadụ na-akpọ ya. Kedu ihe ọ dị, ebee ka ọ ga-ezute ma ọ ga-ekwe omume iri ya? Banyere nke a n'ihu.
Nri ma ọ bụ
Anthurus Archer bụ ero nke mkpụrụ ndụ Reshetnik (ezinụlọ Veselkov) nwere ike ịgbanwe ọdịdị ya. Ọnọdụ mbụ ya bụ ọdịdị nke àkwá nke nwere ihe dịka sentimita ise. N'oge a, ọ dị mfe iji mgbagwoju edo ma ọ bụ ụdị anụmanụ ọzọ. Ekwensu Fingers nwere ọtụtụ usoro-layered usoro:
mucous jelly-dị ka akpụkpọ ahụ;
isi (uzommeputa na spore oyi akwa).
Ọ dị mkpa! A na-ede Anthurus Archer n'ime Akwụkwọ Red.
N'oge oge okooko osisi (site n'August ruo October, gụnyere ihe niile), àkwá mmiri na-agbapụta ma hapụ ihe karịrị pasent 8, ihe ndị ahụ na-emekọ ọnụ. Ogologo oge ha ruru 10 cm. N'oge na-adịghị anya, a na-ekewa okooko ndị ahụ ma bụrụ ndị yiri tentacles tentoples ma ọ bụ helikopta UMARA.
N'ime, ha na-eyi ka ogbo ogwu. Mkpụrụ osisi ahụ dị nnọọ njọ, kpuchie ya na ọchịchịrị, na-etinye ísì ọjọọ.
Ụdị ikpeazụ bụ kpakpando (ma ọ bụ ifuru) nke nwere sentimita 15 cm. Isi nke ekwuru ekwuru site na mkpịsị aka nke ekwensu n'oge okooko na-adọta ijiji ka ha wee gbasaa ihe ọkụkụ ahụ. Nke a bụ ụzọ dị irè a ga-esi kesaa, bụ nke na-abụkarị ihe ndị e ji mara mushrooms.
Mgbe ọkpụkpụ ndị ahụ pụtachara site n'igbu àkwá, Anthurus Archer bi ụbọchị ole na ole. Nke a dị nnọọ mma ịgbatị ọsọ ahụ.
Ị ma? Mkpụrụ ọka na-emepụta vitamin D ma ọ bụrụ na ha nwere ìhè anyanwụ. Nke a gosipụtara na agba nke okpu ha.
Mkpịsị aka Ekwensu na-abịa sitere na Australia (Tasmania) na New Zealand. Obere oge ka e mesịrị, ọ mara ndị Africa, ndị Asian, ndị America na ndị bi na St. Helena na Mauritius. Ndị Europe nọgidere na-emeso ya dị ka onye bịara abịa. Enweghị nkọwa zuru ezu banyere ọdịdị "mkpịsị aka" ekwensu na Europe.
Enwere echiche na maka oge mbụ e webatara ero n'ime afọ 1914-1920 ruo n'ókèala France nke si n'Australia na ajị anụ, nke e nyere na ụlọ ọrụ textile.
Anyị na-adụ ọdụ ka anyị mara ihe oriri na nsị mushrooms.
Ọ gafere n'ekpere ngwa ngwa ma wee mara ebe a. Obere oge, ozi gbasara ọnụnọ "mkpịsị aka" nke ndị German (1937), Switzerland (1942), Bekee (1945), Ọstrịa (1948) na ọbụna ógbè Czech (1963) malitere ịpụta. Na mba USSR, ọ pụtara na 1953, akpan akpan ke 1977 ke Ukraine ye 1978 ke Russia.
Ọ dị mkpa! Eji mara "mkpịsị aka" nke ekwensu dị ka ihe kachasị njọ na ụwa n'ihi na ọ dị n'oge oge okooko.
Ebe obibi ya jikọtara ya na oké ọhịa na-eme ka ọ bụrụ ahịhịa na ala na-emebi osisi, ọzara ma ọ bụ ọzara. Mkpụrụ ọka ndị a nwere ike itolite n'òtù dị iche iche, ọ bụrụ na ọnọdụ ihu igwe kwere ya.
Anthurus Archer ma ọ bụ "mkpịsị aka nke ekwensu", n'agbanyeghị na ọ dị egwu, nwere ike iri ya. Ndị ka kpebisiri ike ịnwale ya, ha na-ekwu na uto dị ka ihe na-adịghị mma dịka anya.
Ị ma? Ero "Veselka" ọ bụla 2 min. na-amụba 1 cm, ya mere a gụnyere ya na Guinness Book of Records.
N'ịbụ ndị na-apụta na ọnọdụ enweghị nri nhọrọ ọzọ maka nlanarị, ị, n'ezie, nwere ike ịbanye Anthurus Archer n'ime nri. N'ọnọdụ ndị ọzọ ọ bụla, ọ bụ inedible. "Mkpịsị aka Ekwensu" dị obere. N'oge oge okooko osisi, ọ na-emenye ndị mmadụ egwu ma na-ebute ísì ụtọ na-adọta ụmụ ahụhụ, mgbe ụbọchị atọ gasịrị, ọ na-apụ.
Ọ bụ ero na-enweghị atụ, ọ bụ ezie na ọ naghị ebute onye riri ya.
Kasị ewu ewu oriri mushrooms bụ: boletus mushrooms, mmanụ aṅụ agaric, chanterelles, nwa mmiri ara ehi mushrooms, boletus mushrooms na aspen mushrooms.
Atụla egwu onye dị otú ahụ, ọ dịghị emerụ ahụ, mana eji ya eme ihe.